Taiwan, ‘toerana mampidi-doza indrindra eto an-tany’? Tsy izany, hoy ny Taiwaney · Global Voices teny Malagasy
Niteraka fanehoan-kevitra mahery tao amin'ny Twitter Taiwaney ny fonombokin'ny The Economist
Voadika ny 05 Mey 2021 4:35 GMT
Niteraka fanehoan-kevitra mahery tao amin'ny Twitter Taiwaney ny fonomboky momba ny tantaran'i Taiwan ao amin'ny Gazety britanika The Economist tamin'ity herinandro ity, izay nahatalanjona ireo mpikirakira marobe ny lohateny hoe “Taiwan: Ilay toerana mampidi-doza indrindra eto an-tany.”
Nisioka fihetseham-po ihany koa ny filoha Taiwaney Tsai Ing-wen tamin'ny 30 avrily, nilaza fa “eny amin'ny lohalaharana amin'ny demaokrasia manerantany” i Taiwan:
Mihoapampana ny lohatenin'ny tantara fa tena misy tokoa ny fandrahonana ara-tafika. Milaza ho manana ny fiandrianam-pireneny ao Taiwan i Shina nanomboka ny taona 1949, rehefa resin'ny ady an-trano shinoa ny Kuomingtang ary nandositra nankany amin'io nosy io. Hatramin'ny nifidianana an'i Tsai Ing-wen, avy amin'ny Antoko Firosoana Demaokratika mpanohana ny fahaleovantena, tamin'ny taona 2016, dia nampitombo avo roa heny ny fomba fikabariana nasionalista i China, ary nalaza tsy nisy toa izany ny teny filamatra “avondrona an-kery i Taiwan” [fr] — ary tena nihanatetika tokoa ny fanazaran-tena sy sarinady miaramila manerana ny andilan-dranomasina.
Efa ela i Etazonia no nandray ny politika “teti-panorona tsy hita be ihany” momba an'i Taiwan, izay anomezana fanohanana ara-politika sy ara-tafika ny nosy nefa tsy nampanantena ampahibemaso fa hiaro azy amin'ny tranga fanafihana ataon'i Shina. Saingy amin'izao fitondran'ny filoha Joe Biden izao, maro ny manampahefana amerikana niantso fiarovana ankarihary an'i Taiwan.
Tamin'ny 14 aprily, mialoha ny fitsidihan'ny irak'i Etazonia an'i Taiwan, nandefa fiaramanidina miaramila miisa 24, ao anatin'izany ireo fiaramanidina mpiady sy afa-mandatsaka baomba nokleary, ho ao amin'ny fari-piarovana an'habakabak'i Taiwan i Shina. Nanoritra ny biraon'ny raharaha Taiwan ao amin'ny filankevi-panjakana ao Beijing fa ny hetsika miaramila dia natao hanehoana ny fahavononan'i Beijing hanakana ny fahaleovantenan'i Taiwan.
Roa andro taty aoriana, tamin'ny antsafa manokana nifanaovana tamin'ny Associated Press, nanao fampitandremana an'i Etazonia amin'ny filalaovana ny “karatra Taiwan” ny Minisitra lefitra ao Shina misahana ny raharaham-bahiny Le Yucheng. Teny an-tselika nataony fa misokatra amin'ny fampiasana hery miaramila i Shina:
Ny hafa kosa nanentana an'i Taiwan hamolavola rafitra diplaomatika mahazaka mijoro manoloana ny fandrahonana ataon'i Shina nefa tsy miankina amin'i Etazonia irery.
Nidera fatratra ny manampahefana ao amin-dry zareo ny olom-pirenena Taiwaney tamin'ny fifehezana ny valan'aretina COVID-19 – miisa 12 monja ny olona maty tao amin'ilay nosy hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Nahitana fitomboana mihoatra ny 8 isanjato ny harinkarena faobe amin'izao vanim-potoana voalohany taona 2021 izao na dia teo aza ny sazy ara-toekarena ampiharin'i Shina sy ny sarinady miaramila miaraka amin'izany. Betsaka amin'ireo mpanao fihetsiketsika ao Hong Kong koa no nialokaloka tany Taiwan manoloana ny fanenjehana ara-politika ataon'i Beijing taorian'ny hetsi-panoherana fampodiana olona ho alefa any Shina tamin'ny taona 2019.